खेल गर्दै | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कोटी: खेलकुद गतिविधिहरू
कस्तो प्रकारको रक्सीहरू बक्सिङमा छन्
बक्सि Begin शुरुवातमा के वर्गहरू छन्। Ath महिना भन्दा कम बक्सि been गर्दै गरेका खेलाडीलाई कुनै प्रतियोगितामा भाग लिन अनुमति छैन। तेस्रो कोटी। प्रतिस्पर्धामा शुरुआती बिरूद्दमा वर्षको दौडानfझगडा जित्नु आवश्यक छ ...
चेल्याबिंस्कमा कहाँ सस्ता जिम, एरोबिक्स, फिटनेस, + विद्यार्थी छुटहरू छन्
जहाँ चेल्याबिन्स्कमा एक सस्तो जिम, एरोबिक्स, फिटनेस, + छात्रहरूका लागि छुट
कसरी बान्सा उपाय गर्ने? एक आराम अवस्थामा? म डिब्बेको विकासको ट्रयाक गर्न चाहन्छु।
बाइसेप्स मापन कसरी गरिन्छ? एक आराम राज्य मा? म क्यानको विकास ट्र्याक गर्न चाहन्छु। मुख्य कुरा सधैं उही राज्य मा मापन गर्न छ। प्राय: यो एक आराम राज्य मा गरिन्छ। तर प्रभाव को लागी ...
2 किलोको लागि 1 किलो कसरी रिसेट गर्न। अब म खाना खाई के खानुहुन्छ? अहिले म 20 मिनेटमा दौड गर्नेछु
१ दिनमा २ किलोग्राम कसरी गुमाउने। अब म खान चाहन्छु तिमी के खान सक्छौ? म अझै २० मिनेट डुएरेटिक्स मद्दतको लागि चलाउने छु)) उठ्नुहोस्। पानी शरीरबाट सब भन्दा चाँडो हटाइन्छ। हैन ...
के एक्सप्लेन्डरले फोर्समा पम्प गर्न मद्दत गर्दछ वा यो मिथक हो?
के विस्तारकर्ताले फोरआर्मसलाई पम्प गर्न मद्दत गर्दछ वा यो मिथक हो? मसँग समान समस्या छ हड्डी धेरै पातलो छ त्यसैले मलाई थाहा छैन विस्तार गर्ने कि नगर्ने ?! नाडी पम्प नहुन सक्छ, तर स्पष्ट रूपमा नराम्रो ...
स्की जैकेट के गर्ने र कसरी गर्ने?
कसरी र कसरी स्की ज्याकेट धुने ?? हो, तपाईंले आफ्नो ज्याकेटलाई वाशिंग मेशिनमा धुनु आवश्यक पर्दैन तपाईं के गर्न सक्नुहुन्न: धुँदा धुलो धुलो पाउडर प्रयोग गर्नुहोस्, यसले प्ोरसहरू रोक्न सक्दछ; ब्लीच थप गर्नुहोस्, यसले पातलो बिगार्नेछ।
के 500 दूरी स्प्रिन्ट छ? या केवल 400 सम्म?
500०० मिटर स्प्रिन्ट हो? वा केवल 400०० सम्म? स्प्रिन्ट एथलेटिक्स शाखाहरू का एक सेट हो, जहाँ एथलीटहरू स्टेडियम भर स्प्रिन्टिंग (गतिमा दौडँदै) प्रतिस्पर्धा गर्छन्। दूरी लम्बाई ...
केटीलाई कुञ्जी जान्न कसरी सिक्नु हुन्छ?
कसरी एक केटी तान्न सिक्न? १. छाती र टाउको पछाडि rep सेटको १२ ओटा सेटको पow्क्ति पow्क्ति, वैकल्पिक रूपमा 1-3- days दिनमा, यदि त्यहाँ जिममा एउटा विशेष जिम छ भने ...
क्रिएटिनको साइड इफेक्ट!
क्रिएटिनको साइड इफेक्ट! सबैजनाको आ-आफ्नै तरीका हुन्छ - यो शरीरको त्रुटिको प्रतिक्रिया हो जुन व्यक्तिले आफ्नै क्षति पुर्‍याउँछ! शुभकामना!))) कहिलेकाँही पेट, डायरिया ... वजन, शक्ति, धीरज))) साइड इफेक्ट याद गरेन ...
ग्लुटेमाइन के हो र यो किन खाएको छ?
ग्लुटामाइन भनेको के हो र किन यो खाइन्छ? ग्लूटामाइन एक आवश्यक अमीनो एसिड हो जुन प्रोटिनमा पाइन्छ र प्रभावकारी मांसपेशीहरूको वृद्धि र प्रतिरक्षा प्रणाली समर्थनका लागि। संक्षिप्तमा, तिनीहरू खाए ताकि तिनीहरूले गर्न सकून् ...
के यो साँचो हो कि एक शांत राज्यमा यस ढिलोको कारण एथलीटहरूले बढेको हृदय र पल्स छ?
यो सत्य हो कि एथलीटहरूको ठूलो हृदय हुन्छ र शान्त अवस्थामा उनीहरूको मुटुको गति सुस्त छ। हो, पेशेवर एथलीटहरूको मुटुको आकार र ट्याचीकार्डियामा वृद्धि भएको छ, यो हो ...
मृत र मृतक एकै कुरा हो भने छैन, के फरक छ!
डेडलिफ्ट र डेडलिफ्ट एक समान हो यदि होइन भने के फरक छ! त्यहाँ पुलका दुई मुख्य प्रकार छन्: क्लासिक सुमो। क्लासिक डेडलिफ्ट संकुचित सेट खुट्टा (व्यावहारिक ...
पेट हटाउन, कुन सिमुलेटरहरू यो व्यस्त हुन आवश्यक छ?
के पेट हटाउने, कुन सिमुलेटरमा तपाईंले तालिम दिनु पर्छ? पेट फरक छ: कमजोर पेटको पर्खाल - त्यसपछि पेट स्टर्नमबाट सुरु हुन्छ। यससँग व्यवहार गर्ने सबैभन्दा सजिलो तरिका बोसोको मोटा पात हो (सम्भव भए पनि मांसपेशि ...
1 महिनाको लागि कसरी पासामा प्रेस गर्न पाउनु हुन्छ? मानिस
१ महिनामा कसरी एब्स बनाउने? एक पुरुषको लागि, यहाँ हेर्नुहोस् एक राम्रो साइट जुनमा सबै कुरा धेरै राम्रो र स्पष्ट वर्णन गरिएको छ http://www.greathome.tk/। म आफैं उही कार्यक्रम पढ्दै छु ...
एथलीटहरूका लागि सही रूपमा कसरी "सुक्खा" प्रश्न
कसरी एथलीटहरूका लागि प्रश्न "सुक्खा" ल्याउने एउटा गल्ती अझै पनि धेरै शरीर सौष्ठवहरूको लागि सामान्य छिटो छ वा खानामा धेरै क्यालोरी घटाइन्छ। अर्को गल्ती चरम परहेज पहिले हो ...
कसरी एक प्रेस डाउनलोड गर्ने हो? प्रविधी, सास फेर्ने आदि।
कसरी प्रेस सही पम्प गर्ने? टेकनीक, सास फेर्न इत्यादि श्वास छोड्दा शरीर लाई उठाउँदै। समान रूपमा सास लिनुहोस्। यो गर्नु राम्रो हो। शरीरलाई काँधको ब्लेडहरू बढ्न थाल्नु अघि जानुहोस् र जानुहोस् ...
साइकल श्रृंखला कसरी स्नेहन गर्ने?
कसरी एउटा साइकल चेन लुब्रिकेट गर्ने? ग्रेफाइट चाहिन्छ। तर फोहोर र अन्य चीजहरूको बारे जुन स्टिक हुन्छ, र त्यसैले यो कपडा हुनुपर्दछ। सोवियत तरीकामा गर्न सकिन्छ। तपाइँले चेनलाई हटाउनुहुन्छ र यसलाई कुनै मेशिनमा भिजाउनुहोस् ...
स्क्वाट्सले के गर्दछ?
स्क्वाटिंगले के दिन्छ? +5 प्रतिक्रियाको लागि, निर्माण गर्न +२० स्क्वाट्सले g * py को मांसपेशीमा सुधार ल्याउँछ। यो थप लोचदार हुन्छ। होइन कति स्क्वाटहरू, गधामा कति व्यायामहरू छन् (राम्रो छ, स्क्वाट्स पनि नितम्ब हिलाउँछ) छ ...
लोहेम्यान राम्रो प्रोटीन हो? whey
के फलामको प्रोटीन राम्रो छ? मट्ठा उत्कृष्ट प्रोटिन। म निकितासँग सहमत छु, धेरै प्रोटीनहरूले मेरो पेटलाई वास्तवमा मोड्छन्, तर त्यसले मलाई सबै ठीक बनायो! यसबाहेक, ऊ खुल्ला छ ...
कर्ल कसरी गर्ने
कसरी क्रन्च गर्ने टेक्निक गर्ने १. भुइँमा झुटो र दाहिने कोणहरूमा तपाईंको घुँडा टेक्नुहोस्। भुइँमा खुट्टा आराम। तपाईंको टाउको पछाडि आफ्नो हात राख्नुहोस् र २ छानामा तपाईंको आँखा केन्द्रित गर्नुहोस्। Make. बनाउनुहोस् ...
55 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,576 प्रश्नहरू।